China ahaziri Tungsten Carbide oyi isi ebu / punch anwụ / waya ịbịaru anwụ na-emepụta na suppliers | Zhongfu Cemented
Tungsten Carbide oyi akwa ahaziri ahazi ebu/punch anwụ/esere waya anwụ
Alldị iche iche nke cemented carbide na-abụghị ọkọlọtọ pụrụ iche na ngwaahịa, nabata na-atụle na eserese na samples!
A na-emepụta ọtụtụ ihe nkedo site na iji isi oyi oyi. A na-edobe isi ihe oyi na-atụ n'isi nnukwu stamping ibu, na elu nke nwụrụ anwụ na-enwe nrụgide nrụgide dị elu. A na-achọ ihe akpụ akpụ ka ọ nwee ike dị elu, ike siri ike na iyi nguzogide.
Mgbe isi oyi na-anwụ anwụ na-ekpo ọkụ, elu ahụ ga-enwerịrị ike siri ike na isi ya ga-enwe ezigbo ike, nke mere na ụfọdụ nrụgide nrụgide dị n'elu nwere ike ịkwụsị nrụgide na-ata ahụhụ n'oge usoro isi oyi. A na-etolite ọtụtụ ihe nkedo site na ebu ndị na-ewe iwe oyi. A na-edobe isi ihe oyi na-atụ n'isi nnukwu stamping ibu, na elu nke nwụrụ anwụ na-enwe nrụgide nrụgide dị elu. A na-achọ ihe akpụ akpụ ka ọ nwee ike dị elu, ike siri ike na iyi nguzogide.
Na nhazi nrụgide ígwè, a na-amanye ígwè ahụ site na ọnwụ n'okpuru mmetụta nke ike mpụga, a na-ejikọta akụkụ nke akụkụ nke metal ahụ, na ngwá ọrụ nke na-enweta ọdịdị na nha nke achọrọ chọrọ ka a na-akpọ waya. ịbịaru anwụ . Nwunye ịse waya bụ ihe dị oke mkpa na nke a na-eri eri nke ndị na-emepụta waya igwe dị iche iche na-eji (dị ka ụlọ ọrụ waya na USB, ụlọ ọrụ waya igwe, ụlọ ọrụ ịgbado ọkụ electrode, wdg) iji see wires. The waya ịbịaru anwụ nwere a dịgasị iche iche nke ngwa, tumadi eji maka ịbịaru ogologo na siri ike na-igwe ihe dị ka Ogwe, wires, wires, ọkpọkọ, wdg Ọ bụ adabara ịbịaru nhazi nke metal na alloy ihe dị ka ígwè. ọla kọpa, tungsten na molybdenum. Ebe ọ bụ na ọnụ ahịa nke waya ịbịaru anwụ na-akwụ ụgwọ ihe karịrị 1/2 nke ọnụ ahịa ịbịaru waya, otu esi ebelata ọnụahịa nke ịbịaru waya na-anwụ ma na-abawanye ndụ ọrụ ya bụ nsogbu ngwa ngwa maka nkeji mmepụta waya metal iji dozie.
Stamping anwụ bụ ngwá ọrụ pụrụ iche maka nhazi ihe (ígwè ma ọ bụ ndị na-abụghị ígwè) n'ime akụkụ (ma ọ bụ ngwaahịa emechara) na nhazi stamping oyi, nke a na-akpọ oyi stamping die (nke a na-akpọkarị oyi stamping die). Stamping bụ usoro nhazi nrụgide nke na-eji ebu arụnyere na pịa iji tinye nrụgide na ihe dị na ụlọ okpomọkụ iji mee ka nkewa ma ọ bụ nrụrụ plastik nweta akụkụ achọrọ.
We depend on sturdy technical force and continually create sophisticated technology to fulfill the demand of New Fashion Design for China Tungsten Steel Precision Machining Cemented Carbide Mold , Tungsten Steel Wear-Resistant Alloy Mold , We intention at Nagoing system innovation, management innovation, elite innovation and ọhụrụ ebe ahịa, na-enye zuru play n'ime mkpokọta uru, na ugboro ugboro na-ewusi ọrụ magburu onwe ya.
New Ejiji Kere maka China Tungsten Carbide , Tungsten Steel , Our company regards "ezigbo ahịa, elu àgwà, Oma mmepụta oge na ezi mgbe-sales ọrụ" dị ka anyị tenet. Anyị na-atụ anya ka anyị na ọtụtụ ndị ahịa na-arụkọ ọrụ maka mmepe ibe na uru n'ọdịnihu. Nnọọ ịkpọtụrụ anyị.
N'ịbụ ndị na-akwado nke ukwuu mepụtara na ọkachamara IT otu, we can provide technical support on pre-sales & after-sales service for Factory directly China Graphite Mold for Molybdenum Tungsten Carbide Alloy Sintering Graphite Mold, Anyị nwere ugbu a nnukwu ngwaahịa ngwaahịa iji mezuo ahịa anyị. na-akpọ maka na mkpa.
Factory ozugbo China Graphite Mold, Graphite Sheet, Anyị na-ejide ụkpụrụ ụlọ ọrụ ahụ mgbe niile “ezi, ọkachamara, dị irè na ọhụrụ”, na ozi nke: ka ndị ọkwọ ụgbọ ala niile nwee obi ụtọ ịnya ụgbọ ala n'abalị, ka ndị ọrụ anyị nwee ike ịghọta uru ndụ ha bara, na ka ọ dị ike na-ejere ọtụtụ mmadụ ozi. Anyị kpebisiri ike ịghọ onye na-ejikọta ahịa ngwaahịa anyị na onye na-enye ọrụ nkwụsị nke ahịa ngwaahịa anyị.
SPUB86C P40 tungsten carbide tube ịchafụ inse ...
Kacha mma ọnụahịa woodturning tungsten carbide ntụgharị ...
2020 N'ogbe square tungsten nnukwu mgbawa oghere ...
Akụkụ omenala & eyi, Tungsten Carbide Vs Carbide, Dureza Del Titanio, Carbide Punch ma nwụọ, Nkọwapụta Cnc Machining China, Akụkụ Carbide Yiri,